Ny fanitarana tsara indrindra ho an'ny GNOME | Avy amin'ny Linux
Ny fanitarana tsara indrindra ho an'ny GNOME
Isaac | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux
Raha mampiasa ianao GNOME amin'ny fizarana GNU / Linux anao, ho fantatrao fa mihoatra ny avelan'ny tontolon'ny birao fototra azonao atao, azonao atao ny manampy fampiasa maro kokoa amin'ny alàlan'ny fametrahana extensions ho an'ity birao ity. Miaraka amin'izy ireo dia hisy fisehoan-javatra vaovao hiseho ao amin'ny interface interface misy anao izay mety ho azo ampiharina indrindra amin'ny asanao isan'andro. Amin'ny fotoana maro, manatsotra ny fandidiana izay ataonao isan'andro.
Mba hahafantaranao ny sasany ny fanitarana GNOME azo ampiharina indrindra, eto aho manampy lisitra. Mbola misy maro hafa koa, saingy nisafidy ny sasany izay efa nanandramako na nampiasaiko matetika aho satria toa azo ampiharina kokoa. Misaotra azy ireo, vitako ny nampihena ny fotoana fiasana amin'ny tranga sasany, manatsara ny famokarana. Te hahafantatra azy ireo ve ianao? Vakio hatrany…
La tanisao ny sasany amin'ireo fanitarana azo ampiharina indrindra ary izay tianao, izy ireo dia:
ImageMagick: dia fanitarana azo ampiharina izay manampy menio ao amin'ny GNOME ahafahanao manova ny sary azy ireo mora foana. Mila misafidy ny sary na sary tianao hanovana habe fotsiny ianao, avy eo tsindrio havanana, safidio ny hamerenanao ireo sary. Misokatra ny menio ary azonao atao ny mametraka ny habe tadiavinao, ny isan-jato isan-jato sns.
Timer Podomoro: ahafahanao mandahatra andiam-potoana maromaro hanaovana hetsika sy fialan-tsasatra mba handaminana ny asanao. Amin'izay dia afaka mifantoka amin'izay ataonao ianao ary hampahafantatra anao amin'ny alàlan'ny fampandrenesana rehefa mila miala sasatra ianao.
Project Hamster: Mitovy amin'ilay teo aloha eo amin'ny lafiny fampiasana, mamela anao hanatsara ny vokatrao amin'ny fampisehoana izay andanianao fotoana amin'ny tontolo misy anao.
kafeinina: Na dia tsy ampiasaiko aza izao, dia mety ho hitan'ny mpampiasa sasany fa mahasoa ny manao Ubuntu na ny distro GNOME anao tsy handeha amin'ny fomba fatoriana. Raha te hitazona ny "manodidina anao" foana ianao dia mety hahaliana anao.
Mamelombelona ireo fifandraisana WiFi: Raha mandeha amin'ny toerana iray amin'ny toerana hafa ianao amin'ny solosainao findainao, dia mety ho liana amin'ny fomba iray hamelomana ireo fifandraisana tsy misy tariby ao anatin'ny tratranao ka hifandray ho azy nefa tsy mila atao tanana. Amin'ity fanitarana ity dia azonao atao.
Screencast mora: fanitarana tsotra hanoratana izay mitranga eo amin'ny biraonao amin'ny fomba tsotra. Ka tsy mila manana programa amin'izany ianao fa ampiasao ity fanitarana maivana ity.
OpenWeather: Raha miahiahy momba ny toetrandro ianao dia azonao atao ny mampiasa ity fanitarana ity mba hampisehoana ny toetrandro any amin'ny faritra misy anao.
Mpitantana Clipboard: dia fanitarana izay ahafahanao mitantana tsara kokoa ny clipboard-nao raha iray amin'ireo manapaka sy mametaka be ianao. Io dia ahafahanao manana singa nalain-tahaka na notapahina ho hitantana azy ireo… Raha nampiasa ny app GPaste ianao, ity fanitarana ity dia safidy tsara indrindra ho azy, ary misy fiasa mitovy aminy.
Custom Corners: ao amin'ny GNOME dia ny safidy mampiseho ny hetsika sy ny varavarankely misokatra amin'ny zoro havia ambony ihany no ampandehanana. Saingy miaraka amin'ity fanitarana ity dia ahetsika ho an'ny zoro efatra.
Wallpaper kisendrasendra: Tena tsy mampiasa azy io intsony aho, fa tamin'ny androny dia nanao izany ary mamela anao hanana fiaviana birao maromaro. Miaraka amin'ity fanitarana ity dia hihodina eo anelanelan'ny fiaviana samihafa ianao ary hanova ny fomba fijerinao.
Dash To Dock: Raha tsy tianao ho maina ny GNOME ary malahelo ny Unity ianao dia azonao ampiasaina ity extension ity izay manampy Dock mahafinaritra eo amin'ny biraonao izay hampidiranao ireo rindranasa ampiasainao indrindra ary hanome azy fikitika hafa.
fanitarana: dia fanitarana ahafahanao mitantana fanitarana hafa. Amin'izany no ahafahanao mampandeha na manafoana ireo fanitarana GNOME napetrakao, raha toa ka tsy mila izany amin'ny fotoana nomenao ianao fa tsy te-hamongotra azy maharitra ianao mba hahafahana mamerina azy mora foana amin'ny manaraka. .
Hevitra ho an'ny mpampiasa: dia ny fanitarana ahafahana mitantana ny fisehon'ny GNOME misy lohahevitra anao. Amin'izany fomba izany dia tsy mila mankany amin'ny menus hafa na fitaovana ianao ary ho hitanao bebe kokoa ny zava-drehetra mba hifamadika haingana eo anelanelan'ny lohahevitra samihafa.
Manantena aho fa nanampy anao tamin'ity fifantina ity. Raha te-handray anjara amin'ny hafa ampiasainao matetika na tianao manokana ianao dia aza misalasala mandao ny anao fanehoan-kevitra...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ny fanitarana tsara indrindra ho an'ny GNOME
KaOS Linux dia mandray ny KDE Plasma 5.16 sy Linux Kernel 5.1
Navoaka ny kinova vaovao an'ny SUSE Linux Enterprise 15 SP1